shaqooyinka adeegga cuntada iyo xirfado | khayraadka Work ka USAHello | USAHello
Baro warshadaha adeegga cuntada iyo noocyada kala duwan ee shaqooyinka adeegga cuntada. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto ee warshadaha cuntada iyo maqaayad. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada. Baro oo cusub kuwaas oo ay bilaabaan ganacisga adeegga cuntada iyaga u gaar ah.
adeegga cuntada waxaa mararka qaarkood loo yaqaan warshadaha cuntada ee, ganacsi makhaayadda, ama hoteelada. In ka badan 14 milyan oo qof ka shaqeeyaan warshadaha cuntada adeegga, iyo shaqooyin badan oo aad si fudud u galaan. warshadaha adeegga cuntada waxaa sii kordhaya waayo maraykanku ku raaxeystaa in baxay in lagu cuno ay qoyska iyo saaxiibada.
Waa kuwee adeegga cuntada shaqo?
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah shaqooyinka iyo xirfadaha aad ka fiirsan kartaa warshadaha cuntada adeegga:
kaaliyaha adeegga cuntada - caawiyeyaasha adeeg cunto diyaarinta iyo cuntada iyo cabitaanka oo macaamiisha u adeega ee cayn kasta oo meelo ka maqaayadaha in ay makhaayadaha qaali. Sidoo kale waxay leeyihiin si ay u caawiyaan biilasha iyo sii jikada nadiif ah oo hagaagsan.
Restaurant karin - cuntokariyihii makhaayad waa qof isku diyaarinaya iyo kuwo cuntada kariya cuntada ee makhaayadaha ama makhaayadaha yar. Waxay sameeyaan wax walba oo ka soo iibsato waxyaabaha lagu kariyo cunto complete. In makhaayadaha waaweyn, waxay kaa caawin karaan ka kariya sare leh diyaarinta miraha iyo khudaarta iyo hawlo kale oo badan oo.
Oo adeegto ama kabalyeeri - miisaska sugitaanka ku lug leedahay ku tilmaamay menu, qaadashada amarada, oo cunto u adeegaya. Waa shaqo fiican oo qof shaqsiyad xilka jecel qabashada dadweynaha. In Maraykanka, server helaan talooyin iyo sidoo kale lacag. Raadi sida loo noqon server makhaayad.
hilibka lagu qalo - a hilibka lagu qalo jeexan hilib xirfad waayo, dukaamada iyo makhaayadaha. hiliblayaasha diyaariyo, qiimo, iyo hilibka muujiyaan. Waa in ay awoodaan in ay xooga saarto iyo lacag bixisid si aad hawlaha dhow dahay fiiro dhow.
kuugga - kuugga waa magac kale oo ah cunto kariye xirfadle tababaran. Dabaakhyo waa in ay leeyihiin fiiro fiican u faahfaahsan, waayo, ka dib cuntada iyo ilaalinta track oo sahay cunto karinta. Qaar ka mid ah maqaayad ku takhasusaan suugada ama cuntada la dubay. dabaakhyo cajiin takhasusay keega iyo macmacaan. kuugga A sous waa qof ka yar kuugga fulinta ku shaqeeya iyo caawisaa la waajibaadka badan.
Martigeliyaha ama xirma - ciidan ama xirma gacanta Boos iyo salaamaya macaamiisha. macaamiisha ayaa loo qaato in miisaskoodiina, iyaga ka siinayo menu ah iyo guud ahaan iyaga ka dhigaa inay dareemaan raaxo. Hosting waa shaqo heer bilow ah, iyo shaqo raadin doono qof saaxiibtinimo oo lagu kalsoonaan karo halkii ay waayo-aragnimo weyn.
Tababaraha Restaurant - Tababaraha makhaayad waa qof maamula restaurant oo dhan iyo hubineysaa in wax walba si qumaati ah. Waxay dusha shaqaalaha, sahayda si, mararka qaar la macaamiisha iyo suuq xamili iyo dhaqaalaha ka qaban. Raadi sida si ay u noqdaan makhaayad ku maareeyaanr.
Watch: Sidee qoys muhaajir bilaabay ay makhaayadda iyo dhaqaalaha ganacsiga
Ka shaqeynta adeegga cuntada u ogolaan doonaa inaad la kulanto iyo la macaamilaan dadka dhaqamada kala duwan. Shaqada laga yaabaa duulaan mararka qaarkood, iyo macaamiisha qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in ay la tacaalaan. Ku sugnaanta qabow cadaadis iyo aragti fiican yihiin tayada wanaagsan loogu talagalay dadka in mustaqbalkiisa this. Shaqooyin badan ayaa waxay bixiyaan adeeg cunto saacadood dabacsan si aad u sameysan kartaa shaqada agagaarka dugsiga, qoyska, iyo hawlaha kale ee. Waad awoodaa qaataan imtixaanka is-qiimaynta ee careeronestop.org si aad u aragto haddii aad dacwana shaqada.
Dadka intooda badan helaan waayo-aragnimo in adeegga cuntada, gaar ahaan maqaayadaha, by bilaabo hoose iyo si tartiib tartiib ah u shaqeeya oo ay maraan jidkii kor. Waxa ugu fiican oo ku saabsan adeegga cuntada waa in aad ka heli karaa shaqooyin badan oo aan tababar ama waayo-aragnimo. Sidaas darteed haddii aad u baahan tahay shaqo isla markiiba, waa doorasho wanaagsan sababtoo ah waxaa sida caadiga ah waa baahida ah bilaa in industry ee. Laakiin haddii aad ku jeclahay cunto karinta, ama aad jeclaan lahayd si aad u hesho wakiilnimadii a, waxaad u baahan doontaa in ay marka hore hesho qaar ka mid ah caddeyn ama waayo-aragnimo.
Waayo, shaqooyinka heerka entry, sida ku xigeenka adeegga cuntada, weelka, iyo miisaskii ay sugayaan, tababar gaar ah ma loo baahan yahay, loo shaqeeyaha intooda badan tababar ku saabsan shaqo-ku-in ay shaqaalaha cusub ku siin doonaa. korodhsi ah shahaadada dugsiga sare kaa caawin doona inaad shaqo hesho. Waxa kale oo aad ka heli kartaa tababar kale oo warqadaha aqoonsiga ka caawin doona.
tababarka ammaanka cuntada iyo shahaadooyinka
Tallaabada wanaagsan ee ugu horeysa shaqo helitaanka adeegga cuntada waa in la helo shahaado looga hawlgalaa cuntada ammaan. Waxa ay muujinaysaa in aad fahmi xeerarka ammaanka cuntada iyo in lagu tababaray in ay cuntada u ilaaliyo. In qaar ka mid ah dalalka (California, Illinois, Arizona, West Virginia, Texas, iyo New Mexico) waa sharciga ku saabsan hawsha gacanta ku haya in ay leeyihiin tababar this.
shahaadada aad u baahan tahay waa Aqoonsiga ANSI ah Badbaadada Cuntada. Waxaad u baahan doontaa si aad u hesho barnaamijka ANSI la aqoonsan ah. Mid ka mid ah barnaamijyada la aqoonsan yahay ServSafe, oo waxaa maamula Ururka Restaurant Qaranka. Laakiin waxaa jira barnaamijyo kale oo badan oo la aqoonsan yahay. Raadi fasalada ammaanka cuntada ee shahaadooyinka ammaanka cuntada gobolka ama online aad.
Karinta iyo maamulka tababarka
Iyadoo qaar ka mid ah cuntada kariya maqaayad iyo maqaayad ku helnay tababar loogu badali lahaa, kuwa kale laga faa'iiday ay waayo-aragnimo ka shaqeeya makhaayadaha. Dad badan oo lagu bilaabo jagooyinka heer-galo iyo shaqo adag ay u guuraan ilaa salaanka.
Haddii aad xiisaynayso in maamulka makhaayad, waxaad u baahan doontaa aqoonsiga qaar ka mid ah. Waxaa jira maaraynta iyo maamulka koorsooyin badan oo laba sano ah la heli karo. Raadi college beesha kuu dhow.
Waxaa jira fursado badan oo ay wax ku bartaan online ku saabsan ganacsiga makhaayadda. dugsiyada Online kaa caawin doona inaad ku dhistaan ​​xirfadaha isgaarsiinta oo ay bartaan oo ku saabsan maaraynta makhaayad. Tusaale ahaan, Coursera dalabyo koorsooyin online in maamulka cuntada iyo sharaabka.
kulliyadaha bulshada badan ayaa bixiya barnaamijyo tababar loogu badali lahaa oo qiimo-jaban iyo caawinta qaxootiga iyo soo galootiga ah si loo hagaajiyo isgaarsiinta iyo Ingiriisi xirfadaha. Raadi college beesha kuu dhow.
dugsiyada kariska bixiyaan tababar cuntada kariya, iyo shaqooyinka kale ee adeegga cuntada. Waxaad ka raadsan kartaa tusaha online dugsiyada tababarka, Kuliyadda.
Job Corps waxay bixisaa waxbarasho lacag la'aan ah iyo tababar dhalinyaro ah rag iyo dumar da ' 16 in 24. Waxay leeyihiin a farshaxanka, Kuliyadda barnaamij.
Isticmaal xarunta shaqada - xarumaha shaqada dawladda ee magaalo kasta waa lacag la'aan. Waxay bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Waxay ku xiran kartaa tababar shaqo adeega cuntada iyo waxbarashada. Raadi xarunta shaqada ee kuugu dhow.
Fiiri online - snagajob.com waa goobta shaqada in ka caawisaa dadka ay shaqooyin helaan saacadeed ee adeegga cuntada iyo warshadaha kale ah.
Mustaqbalka adeegga cuntada - noqon Tababaraha adiga kuu gaar ah!
Ma jeclaan lahayd in ay ka shaqeeyaan adeega cuntada iyo bilaabaan ganacsi kuu gaar ah? ka dalkaaga hooyo waxaa laga yaabaa in cunto dhaqameed - Ma leedahay qaas ahaan cuntada?
baabuur Cuntada waa jikooyinka wareega ee cunto karinta iyo adeega cuntada. baabuurta cuntada u adeegaan oo immika cuntada karsan, inta badan la theme ah qowmiyadaha - cuntada ka dalkaaga hooyo noqon kartaa cusub oo xiiso leh in Americans. Sanadkasta, tirada baabuurta cuntada oo wadanka ku koraa. Waxay aad loo jecel yahay sida kale in maqaayado yihiin. Haddii aad cunto kariye wanaagsan ama ogaado qof karinayaan cuntada delicious, waxa weyn ayay ahaan laheyd in ay iska kaashadaan fikrad this. gaari xamuul ah cuntada A ayaa sidoo kale ka dhigi lahaa ganacsiga qoyska wanaagsan. Read ku saabsan Spice Jikada Kobcinta: tababar qaxootiga in ay ganacsi gaari xamuul ah cuntada. Baro sida loo bilaabaan ganacsi gaari xamuul ah oo cunto ah.
Sidee si ay u bilaabaan ganacsi kuu gaar ah